5 Kushanda Kushandiswa kweData Yakakura - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
5 Anoshanda Anoshandisa eBig Data
Huwandu hwe data inowanikwa kumakambani huri kukura nekukurumidza. Nekuwedzera kwehuwandu, kusiyanisa, uye chokwadi che data, maitiro ekuongorora akajairwa ari kunze kwemufananidzo. Apa ndipo Big Data anosvetukira mukati. Big Data analytics inobvumira ongororo iyi yakawanda yedata kuti ibudise nzwisiso dzaive dzisinganzwisisike kare. Zvese zvatinoita pamhepo - masaiti atinoshanyira, zvinyorwa zvatinoda, zvinhu zvatinogovana, zvatinotenga, mavhidhiyo atinoona - zvese zvinorekodhwa, zvinotariswa nekuongororwa. Nehuwandu hukuru hwe data kunouya akawanda mabhenefiti uye ndizvo zvakaitawo kuomarara. Maindasitiri ese ari kuyedza kukwidziridza mikana iyo data inopa. Mukufamba kwekufungidzira kushandiswa kwe Big Data, maindasitiri mazhinji akafambira mberi nemakiromita kubva kuvakwikwidzi vawo. Zvishandiso zve Big Data siyana pakati pedzidziso uye maitiro. Nemafungiro zvatakafungidzira kuti hazvisati zvaitika asi isu tiri kufambira mberi. Pano taita muchidimbu rondedzero ye Big Data mashandisirwo anogona kuiswa muindasitiri yese.
5 Anoshanda Anoshandisa eBig Data.
Heino rondedzero ye5 inoshanda mashandisiro e Big Data. Maindasitiri akasiyana ari kushandisa Big Data nenzira dzakasiyana. Muchinyorwa chedu takanyora kushandiswa kwe Big Data uye kuti ndeapi maindasitiri ari kuvashandisa. Verenga kuti uzive zvimwe:
1. Nzvimbo Yekutevera:
Makambani emagetsi ave achishandisa nzvimbo analytics kutevedzera uye kuzivisa maodha kwenguva yakati rebei. With Big Data mumufananidzo, zvino zvinogoneka kuronda mamiriro ezvakanaka mukufambisa uye kufungidzira kurasikirwa. Izvozvi zvinogoneka kuunganidza chaiyo-nguva data nezve traffic uye mamiriro ekunze uye kutsanangura nzira dzekufambisa. Izvi zvichabatsira makambani anogadzirisa kudzikisira njodzi mukufambisa, kunatsiridza kukurumidza uye kuvimbika mukuunza.
ne big data, zvipatara zvinogona kuvandudza mwero wekutarisira varwere kwazvinopa. 24 × 7 yekutarisa inogona kupihwa kune vanonyanya kutarisirwa varwere pasina kudikanwa kwekutariswa kwakananga. Pamusoro peizvozvo, kushanda kwemishonga kunogona kuvandudzwa nekuongorora zvinyorwa zvekare zvevarwere nemishonga yavanopihwa. Kudiwa kwekufungidzira kunogona kuderedzwa zvakanyanya.
Muchiitiko cheimwe biopharmaceuticals, kune akawanda misiyano inokanganisa chigadzirwa chekupedzisira. Semuenzaniso, nepo kugadzira insulin yakanyanya kutarisirwa inofanirwa kutorwa kuve nechokwadi chigadzirwa chemhando yaunoda. Nekuongorora zvese zvinokanganisa mushonga wekupedzisira big data kuongorora kunogona kuratidza zvinhu zvakakosha zvinogona kukonzera kusakwanisa mukugadzirwa.
Verenga zvimwe nezve Big Data muhutano
3. Kubiridzira Kuziva & Kubata:
Banking uye chikamu chemari chiri kushandisa big data kufanotaura nekudzivirira hutsotsi hwepa cyber, kubiridzira kwekadhi, kuchengetwa kwenzira dzekuongorora, nezvimwewo. Nekuongorora data rakapfuura revatengi vavo uye data pane yapfuura brute force kurwisa mabhanga anogona kufanotaura kuedza kweramangwana. Kwete chete big data inobatsira mukufanotaura mhosva dze cyber asi inobatsirawo mukubata nyaya dzine chekuita nekupotsa kutengeserana uye kutadza mumambure banking. Iyo inogona kutofanotaura zvinogoneka spikes pamaseva kuitira kuti mabhanga agone kubata matransaction zvinoenderana.
Iyo Securities Exchange Commission (SEC) iri kushandisa big data kutarisa misika yezvemari kune zvingangoitika zvekutengesa zvisiri pamutemo uye zviitiko zvinofungirwa. Iyo SEC iri kushandisa network analytics uye vagadziri vemitauro yepanyama kuti vaone hutsotsi hunogona kuitika mumisika yemari.
Vashambadziri ndemumwe wevatambi vakuru mukati Big Data. Ive iyo Facebook, Google, Twitter kana chero imwe hofori yepamhepo, vese vanochengeta track yemaitiro emushandisi uye mabatiro. Izvi Indaneti hofori dzinopa data rakawanda nezve vanhu kune vashambadziri kuitira kuti vakwanise kumhanyisa makampeni anonangwa. Tora Facebook, semuenzaniso, pano iwe unogona kunanga vanhu zvichibva pakutenga chinangwa, kushanya kwewebhusaiti, zvaunofarira, basa rebasa, huwandu hwevanhu uye izvo zvisiri. Yese iyi data inounganidzwa ne Facebook algorithms uchishandisa big data maitiro ekuongorora. Zvakafanana zvinoenda kuGoogle, kana iwe uchinongedza vanhu zvichibva pakudzvanya iwe unowana mhedzisiro dzakasiyana uye kana iwe ukagadzira mushandirapamwe wevanotungamira unozowana mhedzisiro dzakasiyana. Zvose izvi zvinogoneka kushandiswa big data.
5. Varaidzo & Midhiya:
Mundima yevaraidzo uye midhiya, big data inotarisa pakunangisa vanhu vane zvirimo panguva chaiyo. Zvichienderana nemaonero ako ekare uye maitiro ako online iwe unozoratidzwa mazano akasiyana. Iyi nzira inonyanya kushandiswa neNetflix neYouTube kuwedzera kubatikana uye kutyaira yakawanda mari.
Iye zvino, kunyange vatepfenyuri veterevhizheni vari kutarisa kugovera vaoni vavo Database uye ratidza zviziviso zvakasiyana uye zviratidziro zvinoenderana. Izvi zvinobvumidza mumari iri nani kubva kushambadziro uye zvinopa inobatika mushandisi ruzivo.
Pano tine, 5 mashandisirwo anoshanda e Big Data iyo inogona kushandiswa nemaindasitiri akasiyana. Big data iri kutora vanhu nekushamisika uye nekuwedzera kweIoT uye Machine kudzidza kugona kuri kuwedzera nokukurumidza. Huwandu hwe data huri kukura nekukurumidza uye ndizvo zvakaitawo mikana yekuishandisa. Huwandu hwemakesi ekushandisa akabudirira pa Big Data inogara ichikwira uye kugona kwayo hakusisina kupokana.